Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Honolulu ruo Sydney: Ụzọ ọhụrụ iji efe ụgbọ elu Hawaii
Airlines • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị!
Ụgbọ elu Hawaii Airbus A330
Ụgbọ elu Hawaii taa kwadoro na ọ ga-amaliteghachi ọrụ ya ugboro ise kwa izu n'etiti Australia Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) na Honolulu Daniel K. Inouye International Airport (HNL), malite Dec. 13. Hawaiian, nke kwụsịtụrụ ụzọ na March 2020 ruru. na mmachi njem ndị amachibidoro na mmalite nke ọrịa a, ga-anabata ndị Australia ka ha laghachi n'agwaetiti ndị ahụ na mbinye aka ya na ndị ọbịa Hawaii n'oge ezumike.
Andrew Stanbury, onye isi mpaghara Australia na New Zealand na Hawaiian ụgbọ elu kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ijikọ Hawai'i na Australia na nzaghachi ọha na eze na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi mba Australia na-agba anyị ume.
"Hawai'i bụ ebe ezumike na-ewu ewu maka ndị Australia, anyị makwaara na ọtụtụ ndị mmadụ na-echesi ike ịga ezumike Hawaii. Anyị na-atụ anya ịnabata ndị ọbịa anyị n'ụgbọ ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla ka ha nwee ọmarịcha ọbịa anyị maara na ndị ọbịa anyị hụrụ n'anya ma tụfuo ya, "ka ọ gbakwụnyere.
HA451 ga-amaliteghachi Dec. 13 site na ịpụ HNL na Mọnde na Wednesde ruo Satọde n'elekere 11:50 nke ụtụtụ wee rute na SYD ihe dịka elekere 7:45 nke abalị n'echi ya. Malite na Dec. 15, HA452 ga-apụ na SYD na Tuesday na Thursday site na Sunday na 9:40 pm na 10:35 am ndokwa ịbịarute HNL, na-enye ndị ọbịa ohere ịbanye n'ụlọ ha wee malite ịgagharị O'ahu, ma ọ bụ jikọọ na nke ọ bụla. nke ebe aga njem agbataobi anọ nke Hawaii.
Gọvanọ Hawai'i David Ige n'izu gara aga nabatara ndị ọbịa na-amalite na Nov. 1 ugbu a na mbọ ahụike ọha ebutela n'etiti ọnụ ọgụgụ COVID kacha ala na United States. Hawaiian ụgbọ elu n'ọnwa gara aga nwekwara ulo oru a vidiyo n'ụgbọ elu ọhụrụ na-agba ndị ọbịa ume ka ha gaa njem Pono (n'ihi ọrụ) site na ịnụ ụtọ Hawai'i n'enweghị nsogbu na n'ụzọ ziri ezi.
Na mgbakwunye na ụgbọ elu na-adịghị akwụsị akwụsị na-adaba na Hawai'i, ndị njem Australia na-efe efe na ụgbọ elu Hawaii na-enwetakwa ohere ịbanye na netwọk ụlọ US buru ibu, na-enye ha ohere ịga n'ihu na njem ha na ọnụ ụzọ ámá 16 US - gụnyere ebe ọhụrụ na Austin, Orlando, na Orlando. Ontario, California - na nhọrọ ị ga-enwe nkwụsịtụ na Hawaiian Islands.
Hawaiian ga-aga n'ihu na-arụ ụzọ SYD-HNL nwere oche 278, ụgbọ elu Airbus A330 sara mbara, nke nwere oche akpụkpọ anụ dị larịị 18 Premium Cabin, oche 68 na-ewu ewu Extra Comfort oche, yana oche 192 Main Cabin.
Ugbu a, ọ bụ naanị ụmụ amaala Australia na ndị bi na-adịgide adịgide na-alọta na ndị ezinaụlọ ha ka enyere ikike ịbanye Australia na-enweghị akwụkwọ anaghịkwa. Ọ bụ ezie na a ka ga-ekwupụta ọkwa ntinye chọrọ maka steeti Hawai'i, ndị Hawaii nwere olile anya na steeti Hawai'i ga-adaba ihe ọ chọrọ na iwu gọọmentị US chọrọ ka ndị mbata mba ụwa gosi akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana nnwale COVID-19 na-adịghị mma emere n'ime ụbọchị atọ nke ọpụpụ. dị irè Nov. 8.
Iwu mba ụwa na-aga n'ihu, a na-agbakwa ndị njem ume ka ha na-emelite site na ọwa gọọmentị ka ha na-akwado maka njem ha.
Ndị Hawaii malitere ọrụ SYD-HNL na Mee 2004 wee nọgide na-enwe ọnọdụ ya dị ka onye na-ebu njem na-aga njem na Hawaiʻi site na New South Wales. Ọrụ nke onye na-ebufe ya ugboro atọ kwa izu n'etiti HNL na ọdụ ụgbọ elu Brisbane (BNE), nke ewepụtara na Nọvemba 2012, ka kwụsịtụrụ.
Gị www.HawaiianAirlines.com ilele nhazi ụgbọ elu na ịzụta tiketi.
Mmadụ 8 nwụrụ na ọgbaghara na Houston hip-hop…
Nzaghachi South Africa maka njem ọhụrụ etinyere...